Git Sangit News » मेसी र रोनाल्डोलाई एकसाथ खेलाउने युुभेन्टस्को योजना, पूरा होला त?
मेसी र रोनाल्डोलाई एकसाथ खेलाउने युुभेन्टस्को योजना, पूरा होला त?
लियोनल मेसीले क्लब छाड्न चाहेको औपचारिक जानकारी बार्सिलोनालाई गराइसकेका छन् । यो अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । उनी मनस्थिति परिवर्तन गरेर क्लबमै बस्छन् वा अन्यत्र जान्छन् ? अन्यत्र जानुपर्ने अवस्थामा उनले कुन क्लब रोज्लान्, यसबारे पनि चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ ।
पेरिस सेन्ट जर्मन, म्यानचेस्टर सिटी, म्यानचेस्टर युनाइटेड र इन्टर मिलानले मेसीलाई भित्र्याउने चासो देखाएका छन् । अर्जेन्टिनास्थित निवेल वल्ड ब्वाईज, जहाँबाट मेसीले बाल्यकालमा खेलेका थिए । उक्त क्लबका समर्थकहरुले मेसी स्वदेश फर्कनुपर्ने र आफ्नो क्लबबाट खेल्नुपर्ने भन्दै र्यालि नै निकालिसकेका छन् ।
यहीक्रममा अहिले मेसीसँग नयाँ क्लबको नाम जोडिएको छ । पोर्चुुगिज स्टार क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो आबद्ध इटालियन क्लब युुभेन्टस मेसीलाई भित्र्याउन इच्छुुक देखिएको हो । फ्रान्सेली स्पोर्टस् अनलाईन लिपिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार इटालियन च्याम्पियन युुभेन्टसले मेसीसँग सम्पर्क पनि गरिसकेको छ । युुभेन्टस्का नयाँ प्रशिक्षक आन्द्रे पिर्लो विश्वका दुुई ठूला स्टारलाई आफ्नो क्लबबाट खेलाउन चाहन्छन् ।
प्रकाशित मिति १३ भाद्र २०७७, शनिबार १५:४३